Caqli-gal ah: Muhiim u ah in laga saaro Google Analytics raadinta code-yada laga helo Website-ka
Max Bell, oo ah Semt Maamulaha Guusha ee Macaamiisha, ayaa sheegaya in marka ay timaado joojinta Google Analytics inta lagu jiro imtixaanka maxaliga ah ee goobaha static iyo non-static, waxaan ka heli karnaa talooyin badan, qalabyo, khiyaamo , iyo talooyin. Badanaa, waxaa naloo weydiistay in aan u fayl-gareeyno iyada oo loo marayo IP-ga ama soo saaro qawaaniin shuruudo oo khaas ah oo ku socda makiinadaha awoodda ku leh bogagga
aan halkan kuu sheego in habka asalka ah ee asaasiga ah ee lagu helo Google Analytics Google uu soo rogo codsiyada website-ka rasmiga ee Google Analytics. Waxay hubaal ahaan lahayd inay ka shaqeeyaan dhammaan qalabka moobiilka iyo qalabka mobile, laakiin habsocodka micnaheedu maaha wax marka aan tijaabino iPhones iyo aaladaha kale ee Wi-Fi ku shaqeeya. Qalabaynta imtixaanka maxalliga ahi waa inay isticmaalaan moobilada dabiiciga ah ee loogu talagalay hagaha iyo mashaariicda degaankaaga, ka dibna raadi boggaga cusub ee boggaaga si aad ugu diyaargarowsatid qalabka mobile-ka iyo laptops - funny ipad cases. Ujeedadaas awgeed, inta badan waxaan isticmaalaa codadka xabsiyada iyo feylasha martida iPhones iyada oo aan lahayn fiilooyin. Waxaan sidoo kale isku dayay Xip iyo Shadow Adobe. Halkaas, ma awoodi kari waayay baaxadda IP-ga, sababtoo ah waxaan sameeynay habkaas guriga. Waxaa intaa dheer, adeeggeyga ISPs ma bixiyaan wax cinwaan rasmi ah oo koontada degaanka ah
Waxaan isku dayay inaan sameeyo hab gaar ah oo caado ah oo caadadana waxaa ka mid ah dhowr bog oo ku jira Google Analytics. Tani waxay xaqiijineysaa in profilekaygu uu helayo tayada tayada iyo aragtida noolaha laga helo domains badan. Waxa kale oo aan sameyndoonaa sifooyinka gaarka ah ee ku salaysan martigeliyahayga, waxayna u dhigmaan astaamaha Google Analytics hab wanaagsan. Farsamo ahaan hadalka, way adkaan doontaa in aan raadinno marti-geliyeyaasha rasmiga asalka ah ee bilowga ah. Si kastaba ha noqotee, marka aad samaysay isbeddel ku haboon, waxaad si fudud u heli kartaa natiijooyinka la rabo. Muddo yar ka dib markii ay ka saareen Google Analytics raadinta codsiyada laga soo bilaabo website-kayga intii lagu jiray nidaamka nuqulkii oo mar labaad dib u soo celiyay, waxaan arki karaa in shaashadaydu ay si sax ah u shaqeynayaan natiijooyinka dhammaadkuna waa cajiib.
Ka soo tag booqashadaada gaarka ah Google Analytics
Ma sahlanaan doonto in aad ka soo baxdo booqashadaada ka timid Google Analytics illaa aad ka dhigtay isbeddelada ku haboon. Tani waxay saameyn kartaa tayada gaadiidka iyo tirakoobka boggaaga. Xitaa marxaladda hore ee horumarka goobta, ma heli doontid tiro badan oo aragtiyo ah xitaa markaad sameysey gawaarida raadinta raadinta. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo looga hortagi karo hijigaaga adigoo eegaya Google Analytics. Mid kasta iyo habkastaba waxay leeyihiin faa'iido iyo qul qulatooyin, markaa way ku fududaan lahayd inaad dooratid mid ku habboon shuruudahaaga. Nidaamka adeegga ama qaababka dib-u-noqoshada ayaa ah hababka ugu quruxda badan ee wanaagsan. Hirgelintooda waxay qaadan doontaa wakhti, laakiin natiijooyinka ugu dambeysa marwalba waa weyn. Taas awgeed, waa inaad gelisaa koodhadhka Google Analytics ee ku yaalla bogga internetka ee koodhka internetka kadibna ku noqo serverkaaga si aad u sameysid fiilooyin ku haboon. Hab kale ayaa ah shaandhaynta Google Analytics oo kuu ogolaanaya inaad ka baxdid booqashadaada oo aad hagaajisid xuduudahaaga goobtaada sida ku cad cinwaanada IP. Habkani wuxuu hagaajin doonaa inta badan dhibaatooyinka IP-gaaga oo aad heli kartid gaadiid tayo leh.